ciidamada qaran ee Xudun oo maleeshiyadii soo weerartay ka qabsaday saddex gaadhi iyo 10 maxbuus iyo taliyaha ciidan qaran oo faahiyay guulaha ciidanku gaadhay. | FooreNews
Home wararka ciidamada qaran ee Xudun oo maleeshiyadii soo weerartay ka qabsaday saddex gaadhi iyo 10 maxbuus iyo taliyaha ciidan qaran oo faahiyay guulaha ciidanku gaadhay.
ciidamada qaran ee Xudun oo maleeshiyadii soo weerartay ka qabsaday saddex gaadhi iyo 10 maxbuus iyo taliyaha ciidan qaran oo faahiyay guulaha ciidanku gaadhay.
Hargeysa (foorenews) Jan.22, 2013 – Taliyaha ciidamada Qaranka Somaliland Ismaaciil Maxamed Cismaan (Shaqale) ayaa ka hadlay dagaal maanta aaga Xuddun ku dhex maray ciidamada Qaranka iyo Maleeshiyaad la magac baxay khaatumo oo ka dagaalanta aagaasi taasoo ciidama qaran mar mar weerar gaadmo ah ku soo qaada laakiin jab kala kulma.
Taliye Shaqale, waxa uu sheegay in dagaal dhex maray ciidamada Qaranka iyo Maleeshiyaadka Khaatumo isla-markaana Maleeshiyaadka lagu gaadhsiiyay khasaare laxaadle, isaga oo tilmaamay in laga qabtay laba gaadhi oo kuwa dagaalka ah iyo mid xamuul ah, lagana qabtay ilaa 10 maxbuus.
Qoraal Taliyuhu Caawa soo saaray ayaa ku yidhi “Maanta saacaddu markii ay ahayd 1:45 maalinimo, waxa maleeshiyaadka nabad diidka ah ee isku magacaaba Khaatumo ay weerar gar-darro ah ku soo qaadeen Ciidanka qaranka ee Jiidda Xudun, waxaanay dagaalkaasi kala kulmeen jab iyo halaag. Waxaana la eryaday masaafo dhan 40 KM.
Ciidanka qaranku waxay ka qabsadeen maleeshiyaddaas nabad-diidka ah laba Baabuur oo nooca Tiknikadda ah, hal baabuur oo Xamuul ah. Waxaana laga qabtay 10 Maxbuus”ayuu yidhi isaga oo Taliyuhu sheegay in dagaalkaasi lagaga dhawaacay laba askari.
Previous PostCusbitaalka Weyn ee Hargeysa oo la Ciir Ciiraya Taandhooyin Tiradbadan oo laga Dhex Dhisay Iyadoo Dhismihiisii Horeba qabyo yahay. Next Postxilibaan Aadan Tarabi Oogle oo Golaha wakiilada ka mid ahaa oo geeriyooday iyo Madaxweynaha oo Tacsiyadeeyey,aas kiisana ka qayb galaya.